ShweMinThar: Change Management ~ Micromanagement~၀န်ထမ်းကောင်းတွေ အလုပ်မထွက်အောင်
Change Management ~ Micromanagement~၀န်ထမ်းကောင်းတွေ အလုပ်မထွက်အောင်
ပြောင်းလဲမလို့လား? | Change Management
မပြောင်းလဲတာတစ်ခုပဲရှိတယ်။ ပြောင်းလဲမှုဟာ အမြဲရှိနေတယ်ဆိုတာပါပဲ။ စီးပွားရေး၊ နိုင်ငံရေး၊ လူမှုရေး၊ ပညာရေး စတဲ့ကဏ္ဍအသီးသီးမှာ အပြောင်းအလဲတွေဟာ အမြဲတမ်းရှိနေတဲ့အရာပါပဲ။ စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေအနေနဲ့ နည်းပညာအသစ်ပြောင်းလဲ ရတာ၊ မူဝါဒအသစ်တစ်ခုပြောင်းလဲရေးဆွဲရတာ၊ လုပ်ငန်းဖွဲ့စည်းပုံပြောင်းလဲရတာတွေ
ရှိပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်တိုင်းမှာလဲ ပြောင်းလဲမှုကိုလိုလားတောင့်တတဲ့ သူတွေရှိသလို၊ အပြောင်းအလဲဖြစ်သွားမှာကိုစိုးရိမ်ကြောင့်ကြခုခံတဲ့သူတွေကိုလည်း စီမံခန့်ခွဲသူတိုင်းကြုံတွေ့ဖူးကြမှာပါ။ ပြောင်းလဲမှုကိုမလိုလားဘဲခုခံကြတာတောင်မှ အောင်အောင်မြင်မြင်ကျော်လွှားပြောင်းလဲနိုင်သူတွေရှိကြပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုလုပ်တဲ့ နေရာမှာအသုံးဝင်မယ့်နည်းလမ်းအချို့ကိုဖေါ်ပြလိုပါတယ်။
 Note the basics of good change management. အပြောင်းအလဲတစ်ခုကို စီမံခန့်ခွဲဖို့လိုအပ်လာတိုင်းမှာ သိနေရမယ့်အခြေခံအချက်တွေရှိပါတယ်။ ဒါတွေကိုနားလည်နေဖို့တော့လိုအပ်ပါတယ်။ လူတွေဟာ မဖြစ်မနေပြောင်းလဲ ရတော့မယ်ဆိုရင်တော့ ပြောင်းလဲကြတာများပါတယ်။ ဥပမာ- စာရေးသူတို့ ကျောင်းတွေ၊ တက္ကသိုလ်တွေတက်စဉ်က စာကြည့်၊ စာကျက်အရမ်းပျင်းတဲ့ သူတွေရှိပါတယ်။ ဘယ်ကျောင်းသားမဆိုစာကျက်ပျင်းရင်တောင် စာမေးပွဲအောင်ချင်ကြတာများပါတယ်။ စာဆိုလှည့်မကြည့်ခဲ့တဲ့သူတွေက မနက်ဖြန်စာမေးပွဲ ဖြေရတော့မယ်ဆိုရင် ဒီလိုညမျိုးမှာစာကိုအင်တိုက်အားတိုက် ကျက်တတ်ကြပါတယ်။ ဒါဟာ မပြောင်းလဲလို့ (စာမကျက်လို့) မရတော့ဘူးဆိုတာသူတို့နားလည်လို့ပါ။
နောက်တစ်ခုကပြောင်းလဲရမှာတော့ သိတယ်။ ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာမသိတဲ့အခါမှာ လူ့သဘာဝအရ ဒီအတိုင်းလေးပဲ ချော်လဲရောထိုင်နေသွားတတ်ပါတယ်။ စာရေးသူတို့လည်း ကိုယ်တွေ့ကြုံဖူးခဲ့တာပါပဲ။ တချို့အရာတွေကိုယ့်ကိုကိုယ်ပြောင်းလဲရမယ်ဆိုတာ သိတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဘယ်လိုပြောင်းလဲရမလဲဆိုတာမသိတာမျိုးတွေပါ။ ဘယ်လို ပြောင်းလဲရမလဲဆိုတဲ့နည်းလမ်းသိရင် လူတွေဟာပြောင်းလဲတတ်ကြပါတယ်။ တခါတလေမှာ အပြောင်းအလဲလုပ်မယ့်လုပ်ငန်းစဉ်တစ်ခုလုံးမှာ မိမိပါဝင်ခွင့် ရမှ ပြောင်းလဲတတ်တဲ့သူတွေလည်းရှိပါတယ်။ အဓိကကတော့ သူတို့ဟာ ဒီပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအကောင်အထည်ဖေါ်သူတွေအထဲက တစ်ဦးအနေနဲ့ သူတို့ကိုသူတို့ခံယူလိုကြလို့ပဲဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်တော့ ၀န်ထမ်းအတော်များများဟာ ပြောင်းလဲမှုလုပ်လိုက်လို့ သူတို့အတွက် ဥပမာ ရာထူး၊လစာ၊ ခံစားခွင့်တွေ လုံခြုံ စိတ်ချရမယ်ဆိုရင် အပြောင်းအလဲကို လက်ခံတတ်ပါတယ်။ တကယ့်တကယ်တော့ဝန်ထမ်းအများစုဟာ သူတို့မှာရှိနေတဲ့ တချို့ သဘောထားတွေကိုတော့ ပြောင်းလဲနိုင်ဖို့ ခက်ခဲတာတွေရှိနေတတ်ပါတယ်။ ဒီအခြေခံသဘောတရားတွေကို ပြောင်းလဲမှု မလုပ်ခင်မှာနားလည်အောင်ကြိုးစားပါ။
 Involve your staff in the process of change. ပြောင်းလဲမှုဟာ တစ်ဦးတစ်ယောက်တည်းလုပ်လို့အောင်မြင်ဖို့ဆိုတာ မလွယ်ပါဘူး။ ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်တွေအထဲကို ၀န်ထမ်းတွေကိုတက်တက်ကြွကြွပါဝင် လာအောင်လုပ်ပါ။ ပြောင်းလဲမှု၊ စီမံခန့်ခွဲသူနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ တသားတည်း ကျပြီဆိုရင် ၀န်ထမ်းတွေဟာ ပြောင်းလဲမှုကို ခုခံဖို့မဖြစ်နိုင်သလောက် ရှိသွားပါပြီ။ ပြောင်းလဲမှုကိုလုပ်ဆောင်ဖို့အတွက်အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲတာက စလို့အကောင်အထည်ဖေါ်တာ၊ ပြန်လည်သုံးသပ်တာတွေအဆုံး ၀န်ထမ်းတွေ ပါဝင်နိုင်အောင်လုပ်ဆောင်နိုင်ရင်ပိုကောင်းပါတယ်။ ပြောင်းလဲမှုလုပ်ငန်းစဉ်မှာ တကယ်လုပ်ဆောင်ကြတဲ့ doer တွေကိုသာအာရုံစိုက်ပါ။ အပြောသမား၊ ဝေဖန်ရေးသမားတွေလိုမဟုတ်ဘဲ doer တွေဟာ စီမံခန့်ခွဲသူတွေကို အထောက်အပံ့အများကြီးဖြစ်စေပါတယ်။
 Ensure staff clearly understand why the change is necessary. ဘာကြောင့်ပြောင်းလဲဖို့လိုအပ်တယ်ဆိုတာကို ၀န်ထမ်းတွေတကယ် နားလည်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီလိုပြောင်းလဲလိုက်လို့ဘယ်လိုကောင်းကျိုးတွေ ရှိလာနိုင်တယ်၊ ဘယ်လိုအားနည်းချက်တွေရှိနိုင်တယ်ဆိုတာကို ၀န်ထမ်းတွေ နားလည်နေဖို့ ဘယ်လို Communication Strategy တွေသုံးမလဲဆိုတာတွေ စီမံခန့်ခွဲသူတွေအနေနဲ့ စဉ်းစားအကောင်အထည်ဖေါ်ရပါမယ်။ စီမံခန့်ခွဲသူတွေအနေနဲ့ ပြောင်းလဲမှုလုပ်ရတဲ့အကြောင်းအရင်းကို ယထာဘူထကျကျနားလည်အောင်ရှင်းပြထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ အတွေးအခေါ် အကြံအဥာဏ်အသစ်၊ ပြောင်းလဲမှုအသစ်တွေကို တခါတလေမှာ ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ အဓိပ္ပါယ်ကောက်လွဲတာတွေရှိပါတယ်။
 Sell the benefits. ပြောင်းလဲလိုက်လို့ရလာမယ့် အကျိုးကျေးဇူးကို ပြောပြထားပါ။ လူသဘာဝအရ အများစုဟာ မိမိအတွက်၊ မိမိဌာန၊ မိမိအသင်းအဖွဲ့အတွက် ဘာအကျိုးရှိမလဲဆိုတာကို သိချင်ကြပါတယ်။ အဲတော့အပြောင်းအလဲလုပ်လိုက်ရင်မိမိအတွက်၊ မိမိဌာနအတွက် ဘာရမှာလဲဆိုတာကို အမြဲစိတ်ဝင်စားကြပါတယ်။ ဒီအချက်အပေါ်မှာနားလည် အသုံးချပြီးပြောင်းလဲမှုကိုလက်ခံအောင်ဆွဲဆောင်စည်းရုံးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
 Provide tools resources and support. အပြောင်းအလဲတော့ လုပ်ချင်ပါရဲ့ လိုအပ်တဲ့ အရင်းအမြစ်၊ ထောက်ပံ့မှုတွေ၊ အသုံးအဆောင်ပစ္စည်းတွေမရရင် အပြောင်းအလဲကို ဘယ်လောက်ပဲလုပ်ချင်နေပါစေ။ အမှန်တကယ်ပြောင်းလဲ နိုင်ဖို့မလွယ်ပါဘူး။ လိုအပ်တဲ့အရင်းအမြစ်တွေမပေးနိုင်ရင် ပြောင်းလဲမှုကို မလုပ်တာပိုကောင်းပါတယ်။ နောက်တစ်ခုက အပြောင်းအလဲကို ၀န်ထမ်းတွေ အမီလိုက်နိုင်ဖို့အတွက် လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးဖို့လည်းလိုအပ်ပါတယ်။ အပြောင်းအလဲကို အပြုသဘောဆောင်တဲ့ သဘောထားမျိုးထားပြီး အကောင်အထည်ဖေါ်သူတွေကို ချီးကျူးစကားတွေနဲ့ အားပေးပါ။ အကျိုးကျေးဇူးအနေနဲ့ အခြားပါဝင်ပတ်သက်သူတွေဆီကိုကူးဆက်သွားနိုင်တဲ့ အာနိသင်ရှိလို့ပါပဲ။ အဓိကမမေ့စေချင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကတော့ လူတွေဟာ သူတို့ရဲ့ သက်တောင့်သက်သာရှိတဲ့ဇုန် comfort zone ထဲက ရုံးထွက်ဖို့မလွယ်ကူပါဘူး။ အပြောင်းအလဲဆိုတာအများနဲ့လုပ်မှ အောင်မြင်တတ်တာများပါတယ်။ အများသဘောတူညီမှုရလာအောင် စွဲဆောင်စည်းရုံးနိုင်စွမ်းကလည်း စီမံခန့်ခွဲမှုအရည်အသွေးတစ်ခုပဲ ဖြစ်ပါတယ်။
လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်ပါ! ကြိုးကိုင်မနေပါနဲ့တော့| Micromanagement
စိတ်တွန်းအားနဲ့ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုရှိပြီး စိန်ခေါ်မှုကို ကြိုက်တဲ့ ၀န်ထမ်းတွေ ရှိပါက မန်နေဂျာ တွေအနေနဲ့ လုပ်ကိုင်ရတဲ့ လုပ်ငန်းတော်တော် များများကို နေရာတကာ ချုပ်ကိုင်မနေတော့ဘဲ တာဝန်ခွဲဝေပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တခါတလေဖြစ်တတ်တာက စီမံခန့်ခွဲသူ၊ မန်နေဂျာတွေက လက်အောက်ငယ်သား ၀န်ထမ်းတွေ အပေါ် ယုံကြည်မှုမရှိကြတော့ အလုပ်တွေကို ခွဲမပေးဘဲ နေရာတကာ ၀င်ပါနေကြတယ်။ နေရာတကာ ပါရတယ်ဆိုတာ မပါလို့မရတဲ့ အခြေအနေတွေ ကြောင့်လဲ ဖြစ်တတ်ပါတယ်။ မန်နေဂျာ တဦးချင်းက ၀န်ထမ်းတွေအပေါ် ဘယ်လို ရှုမြင်ကြလဲ ဆိုတဲ့အပေါ်မှာလဲမူတည်နိုင်ပါသေးတယ်။
စီမံခန့်ခွဲမှုပညာရှင် McGregor ရဲ့ အဆိုအရဆိုရင် မန်နေဂျာတွေဟာ ၀န်ထမ်းတွေအပေါ်မှာ အယူအဆ (၂) မျိုးနဲ့ ရှုမြင်ကြပါတယ်။ McGregor ကတော့ Theory X နဲ့ Theory Y လို့ဆိုထားပါတယ်။ Theory X နည်းလမ်းအရဆို ရင် ၀န်ထမ်းတွေဟာ အများအားဖြင့် အလုပ်ကို မနှစ်သက်ကြဘူး၊ တာဝန်ပေးရင် မလိုချင်ကြဘူး။ ဒါကြောင့်လဲ ၀န်ထမ်းတွေ အလုပ်ကို ကြိုးစားလာအောင်၊ အလုပ်အပေါ်မှာ စိတ်ပါလာအောင် ဆုပေး ဒဏ်ပေးစနစ်ကို သုံးပြီး စီမံခန့်ခွဲရပါတယ်။
Theory Y နည်းလမ်းကတော့ Theory X နဲ့ ဆန့်ကျင်ဘက်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေဟာ ယေဘုယျအားဖြင့် လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို လိုလိုချင်ချင် ထမ်းဆောင်ချင်ကြတယ်။ တာဝန်တွေ ခွဲဝေပေးတာကို နှစ်သက်ကြတယ်။ အပြစ်ပေး၊ အရေးယူမှုတွေသက်သက်နဲ့တော့ ၀န်ထမ်းတွေ
အလုပ်ကြိုးစားလာအောင် မလုပ်နိုင်ဘူးလို့ ဆိုထားပါသေးတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေဟာ
သူတို့ရဲ့ အလုပ်အပေါ်အမှာ အမှန်တကယ် စိတ်ရောကိုယ်ပါ စွမ်းဆောင်လာကြတဲ့ အခါ၊ အလုပ်အပေါ်မှာ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ ရှိလာတဲ့အခါမှာ အပြစ်ပေး၊ အရေးယူမှု
ဆိုတာထက် ပင်ကိုယ်အသိစိတ်နဲ့ သူတို့ကို သူတို့ ဦးဆောင်လာကြပါတယ်။
McGregor ရဲ့ Theory X နဲ့ Theory Y (၂)ခုကို သီးခြားစီ လက်ခံကျင့်သုံးတာထက်
Theory (၂) ခုစလုံးကို ပေါင်းပြီးသုံးတာပိုပြည့်စုံတယ်လို့ စာရေးသူကတော့
ယူဆမိပါတယ်။ တချို့ဝန်ထမ်းတွေဟာ Theory X ကိုသုံးမှ ရတာမျိုးရှိပါတယ်။
အလုပ်တာဝန်ပေးတာကို လိုချင်ကြတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေကို တာဝန်ခွဲဝေပေးဖို့
Delegation လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ စီမံခန့်ခွဲသူ၊ မန်နေဂျာတွေအနေနဲ့
ပါးနပ်ဖို့ လိုပါတယ်။ နေသာသလို နေချင်တဲ့ ၀န်ထမ်းကို Delegate လုပ်ပြီး စိန်ခေါ်မှုကို ကြိုက်တဲ့သူလဲကြရော Delegate မလုပ်မိတော့ နေသာသလို နေချင်တဲ့ ၀န်ထမ်းလဲ မလုပ်ချင်တဲ့ အလုပ်ကို လုပ်နေရသလိုဖြစ်၊ စိတ်ခေါ်မှုကို ကြိုက်တဲ့သူလဲ
စိတ်မပါတော့ဘဲ ကြာလာတော့ လုပ်ငန်းကို စွန့်ခွာသွားကြတာတွေရှိပါတယ်။
တာဝန်ခွဲဝေပေးတဲ့အခါမှာ Delegation လုပ်တဲ့အခါမှာ၊ လုပ်ပိုင်ခွင့်နဲ့ ဆုံးဖြတ်ပိုင်ခွင့် Empowerment ကိုပါတပါတည်းပေးအပ်ဖို့လိုပါတယ်။ ဖြစ်တတ်တာက တာဝန်တော့ ခွဲဝေပေးပါတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်မပေးတဲ့အခါ Delegation ရဲ့အနှစ်သာရ ပျောက်သွားပါတယ်။ Empowerment လုပ်တဲ့အခါ ၀န်ထမ်းတွေ အနေနဲ့ လုပ်ငန်းခွင် စိတ်ကျေနပ်မှုတွေ တိုးလာစေပါတယ်။ Delegation ကောင်းကောင်းမလုပ်နိုင်သေး သ၍ကတော့ တကယ့်ကို တော်တဲ့ မန်နေဂျာကောင်းတဦးအဖြစ်ရပ်တည်ဖို့ မလွယ်ပါဘူး။ တာဝန်ခွဲဝေပေးခြင်း Delegation ကိုကောင်းကောင်းအသုံးချ မယ်ဆိုရင်တော့ အဆင့် (၄) ဆင့်လောက်ကို လိုက်နာဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
• Specifically assign tasks to individual team members .
မိမိရဲ့ လက်အောက်ငယ်သားတဦးချင်းက လုပ်ကိုင်ရမယ့် လုပ်ငန်းတာဝန်တွေ တိတိကျကျသိရှိနေဖို့ သတ်မှတ်ပေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့လဲ
သတ်မှတ်ပေးထားတဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ကျေပွန်အောင် ထမ်းဆောင်ဖို့
• Give team members the correct amount of authority to accomplish assignments.
လက်အောက်ငယ်သား၊ ၀န်ထမ်းတွေအပေါ် တာဝန်ပေးပြီးရင် သင့်တင့်တဲ့
လုပ်ပိုင်ခွင့်တွေ ပေးထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ရသင့်သလောက်
မရဘဲ တာဝန်ပေးအပ်တာကို ခံရတဲ့ဝန်ထမ်းတွေဟာ အလုပ်ဖြစ်အောင်လုပ်လို့
ရတာမှန်ပေမဲ့ လိုအပ်တာထက် ပိုခက်ခဲတတ်ပါတယ်။ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို လိုအပ်တဲ့
အတိုင်းအတာထက် ပိုပေးမိရင်လဲ လုပ်ငန်းအတွက် အကျိုးရှိစေတဲ့ ရလဒ်တွေထက် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို မလျော်မကန်အသုံးချတာတွေဖြစ်တတ်ပါတယ်။
• Make sure that team members accept responsibility.
တာဝန်ခွဲဝေပေးခံရတဲ့ လက်အောက်ငယ်သား၊ ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ ပေးအပ်တဲ့
တာဝန်တွေကို လိုလိုချင်ချင် လက်ခံနေဖို့အရေးကြီးပါတယ်။ ဖြစ်တတ်တာက
တချို့မန်နေဂျာတွေက လိုအပ်တဲ့ ထောက်ပံ့မှု Enough Support တွေ မပေးဘဲ
တာဝန်တွေ လိုအပ်တာထက်ပိုပေးမိကြပြီး ၀န်ထမ်းတွေအနေနဲ့ လက်မခံလို ကြပါဘူး။ တာဝန်ရှိခြင်း Responsibility နဲ့ လုပ်ပိုင်ခွင့်ရှိခြင်း Authority
ဟာ မတ်စေ့တစေ့ရဲ့ ခေါင်းနဲ့ ပန်းလို ကျောခြင်းကပ်နေပါတယ်။ Responsibility နဲ့ Authority ရဲ့ အဓိကကွဲပြားမှုကတော့ မန်နေဂျာတွေက
လက်အောက်ငယ်သားတွေဆီ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို ခွဲဝေပေးပြီး တာဝန်ရှိလို့
တာဝန်ခံရလာတဲ့အခါမှာ မန်နေဂျာရော၊ လက်အောက်ငယ်သားပါ (၂) ဦးစလုံး
ပါဝင်ရပါတယ်။ အကြောင်းကတော့ ခွဲဝေပေးထားတဲ့ တာဝန်တွေကို အကောင်အထည်ပေါ် ဆောင်ရွက်တဲ့အခါမှာ ကျေနပ်ဖွယ် ရလဒ်မျိုး (ယခင်ကြိုတင်သတ်မှတ်ပြီးဖြစ်တဲ့ စံရလဒ်မျိုး) ရမလာတဲ့အခါမှာ လက်အောက်ငယ်သားအပါအ၀င် တာဝန်ခွဲဝေပေးသူ မန်နေဂျာမှာလဲ တာဝန်ရှိတာကိုဆိုလိုတာပါ။
• Create accountability.
ပေးအပ်ခွဲဝေပေးထားတဲ့ တာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်လို့ ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့
တာဝန်ခံမှု Accountability ဆိုတာ ပေးအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတွေကို ထမ်းဆောင်လို့
ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ ရလဒ်တွေက ကောင်းသည်ဖြစ်စေ၊ ဆိုးသည်ဖြစ်စေ ရဲရဲ့ဝံ့ဝံ့
တာဝန်ခံခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ လက်အောက်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့
အစီအရင်ခံစာတွေကို သက်ဆိုင်ရာစီမံခန့်ခွဲသူတွေဆီ တင်ပြရပြီး၊ မန်နေဂျာတွေအနေနဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ဖွဲစည်းပုံအရ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်ကို
စောင့်ကြည့်တည့်မတ်ပေးနေရပြီး တာဝန်ခံပေးနေရပါတယ်။ ဒီအဆင့်မှာ မန်နေဂျာတွေဟာဝန်ခွဲဝေပေးရင် လုပ်ပိုင်ခွင့်ကိုတပါတည်းပေးအပ်ဖို့ လိုအပ်တာမှန်ပေမဲ့ အကြောင်းအမျိုးမျိုးကြောင့် အခက်အခဲရှိနိုင်ပါတယ်။
တာဝန်ခွဲဝေပေးတယ်ဆိုတာ ရော့အင့် ဆိုပြီးလုပ်လို့မရတဲ့အတွက် အစီအစဉ်တွေရေးဆွဲရပါတယ်။ အစီအစဉ်ရေးဆွဲခြင်း Planning ဟာ အချိန်ယူဖို့ လိုအပ်တဲ့အတွက် မန်နေဂျာတွေအနေနဲ့ အရင်ထက် အချိန်တွေပိုမို လုယူရပါတယ်။
မန်နေဂျာတွေဟာ လက်အောက်ငယ်သားတွေအနေနဲ့ သက်ဆိုင်ရာလုပ်ငန်းတာဝန် တွေကိုထိထိရောက်ရောက်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်မျိုး ရှိရဲ့လားဆိုတဲ့ အတွေးများစွာနဲ့ ၀န်ထမ်းတွေအပေါ် လွှမ်းမိုးနေချင်ကြပါသေးတယ်။ လက်အောက်ငယ်သားတွေအနေနဲ့ လိုအပ်တဲ့စွမ်းဆောင်ရည်မျိုးမရှိတဲ့အခါမှာ လိုအပ်တဲ့ သင်တန်းပေးမှုတွေ လုပ်ရပြန်ပါတယ်။
မန်နေဂျာတွေအနေနဲ့ တာဝန်ခံမှု (၂)ခုကိုလဲ တပြိုင်နက် လက်ခံနေရပါတယ်။
သူတို့ကိုယ်တိုင်ရဲ့ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ချက်သာမက လက်အောက်ငယ်သားတွေရဲ့
လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ချက်ကိုလဲ တာဝန်ခံရပါတယ်။ လက်အောက်ငယ်သား၊ ၀န်ထမ်း တဦးဦးက သတ်မှတ်လုပ်ငန်းတာဝန်ကို ထိထိရောက်ရောက်မလုပ်နိုင်တာမျိုး၊ ကြိုတင်သတ်မှတ်ထားတဲ့ စံနှုန်းမပြည့်မီတာမျိုးဖြစ်လာခဲ့ရင် လုပ်အောက်ငယ်သား
ဒါပေမဲ့ လုပ်ငန်းတာဝန်ကိုကျေကျေပွန်ပွန် ထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခါမှာတော့ ဌာနတခုလုံး
အသင်းအဖွဲ့ တခုလုံးရဲ့ ပုံရိပ် Image ကိုကောင်းမွန်လာစေနိုင်ပါတယ်။ တချို့ မန်နေဂျာတွေဟာ လက်အောက်ငယ်သားတွေအပေါ် တာဝန်ခွဲဝေပေးလိုက်ရင်
အဖွဲ့အစည်းကို ပေးစွမ်းနိုင်တဲ့ သူတို့ရဲ့ တန်ဖိုးတွေကျလာ နိုင်တယ်လို့ မြင်တတ်ကြပါသေးတယ်။ ဘယ်လိုပဲဖြစ်ပါစေ လက်အောက်ငယ်သားတွေ လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို ထိထိရောက်ရောက်စွမ်းဆောင်နိုင်တဲ့အခါမှာ စီမံခန့်ခွဲသူ
တွေအနေနဲ့ ပိုလို့တောင် တန်ဖိုးတက်လာသေးတယ်ဆိုတာ မန်နေဂျာတွေ နားလည်အောင် လုပ်ထားဖို့တော့ လိုအပ်ပါတယ်။
တာဝန်ခွဲဝေပေးခြင်း Delegation ကိုလုပ်ဆောင်တဲ့အခါ မန်နေဂျာတွေ လက်ကိုင်ကျင့်သုံးသင့်တဲ့ မူကြီး (၄) ခုရှိပါတယ်။ အဲဒါတွေကတော့
 Match the employee to the task.
လုပ်ငန်းတာဝန်နဲ့ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းခံရမယ့် ၀န်ထမ်းကို ယှဉ်တွဲတတ်ဖို့
လိုပါတယ်။ ဘယ်လိုဝန်ထမ်းတွေကိုတော့ Delegate လုပ်မယ်ဆိုတာကို
သေသေချာချာ ရွေးချယ်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ တာဝန်ပေးအပ်ခြင်းကိုခံရမယ့်
၀န်ထမ်းအနေနဲ့ ပေးအပ်တဲ့လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို အောင်အောင်မြင်မြင်
ထမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝမှုတွေရှိနေရမှာဖြစ်ပါတယ်။ တခါတလေမှာ လိုအပ်တဲ့ ကျွမ်းကျင်မှုနဲ့
လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည်တွေ ရှိပေမယ့် တာဝန်ခွဲဝေပေးခြင်းကို လိုလိုလားလား
မရှိတဲ့ ၀န်ထမ်းတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ကျွမ်းကျင်မှုလဲရှိတယ်၊ လိုလိုလားလားလဲ
ရှိတယ်ဆိုရင်တော့ ဒီလိုဝန်ထမ်းမျိုးကို တာဝန်ခွဲဝေပေးဖို့အသင့်တော်ဆုံးပဲ
 Be organized and communicate clearly.
ဘယ်လိုတာဝန်တွေကို ထမ်းဆောင်ရမယ်၊ ဘယ်အချိန်မှာ ပြီးစီးရမယ်၊ ဘယ်လို
ကျွမ်းကျင်မှုတွေတော့ ရှိရမယ်ဆိုတာတွေကို တိတိကျကျ ရှင်းရှင်းလင်းလင်း သတ်မှတ်ထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
 Transfer authority and accountability with the task.
လုပ်ငန်းတာဝန်ခွဲဝေပေးခြင်းလုပ်ငန်းစဉ် Delegation Process မှာ တာဝန်တွေသာပေးပြီး လုပ်ပိုင်ခွင့်၊အာဏာ မပေးခဲ့ဘူးဆိုရင် ပေးအပ်ထားတဲ့
လုပ်ငန်းတာဝန်တွေကို အောင်မြင်အောင်စွမ်းဆောင် ဖို့ မလွယ်ကူနိုင်သလို တာဝန်ခံမှုဆိုတာလဲ ပျောက်ကွယ်နေတတ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာ ၀န်ထမ်းတွေ လုပ်ငန်းတားဝန်တွေကို အောင်မြင်အောင် စွမ်းဆောင်နိုင်ဖို့အတွက် လိုအပ်တဲ့ သွင်းအားစုတွေ၊ သြဇာအာဏာတွေ၊ သတ်မှတ်ပြီးဆုံးရမယ့်အချိန်တွေ ကို စီမံခန့်ခွဲသူတွေအနေနဲ့ ထောက်ပံ့ပေးဖို့လိုအပ်ပြီး ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ စွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်ရရှိလာတဲ့ ရလဒ်တွေက ကောင်းတာပဲဖြစ်ဖြစ်
 Choose the level of delegation carefully.
တာဝန်ခွဲဝေပေးခြင်း Delegation ဆိုတာ မန်နေဂျာတွေဟာ တာဝန်ခွဲပေးပြီး
ပေးအပ်တဲ့ အလုပ်နဲ့ (သို့) တာဝန်ပေးအပ်ခံရတဲ့ ၀န်ထမ်းနဲ့ ခပ်ဝေးဝေးမှာ နေဖို့အတွက် မဟုတ်ပါဘူး။ စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာ လုပ်ငန်းစဉ်တွေနဲ့
ဆောင်ရွက်ချက်တွေကနေ ရလာတဲ့ ရလဒ်တွေအပေါ်မှာ ထိမ်းချုပ်မှုတွေ အတန်အသင့် လုပ်ဖို့ လိုအပ်ပါတယ်။ တာဝန်ပေးအပ်ခံရတဲ့ ၀န်ထမ်းအပေါ် မန်နေဂျာရဲ့ ယုံကြည်မှုနဲ့ လုပ်ငန်းရဲ့ အရေးကြီးမှုအပေါ်မူတည်ပြီး Level အမျိုးမျိုးကို တာဝန်ခွဲဝေပေးဖို့ ရွေးချယ် နိုင်ပါတယ်။
Ref; Principles of Management by Ellen A. Benowitz, M Ed.
စီးပွားရေးလုပ်ငန်းတွေမှာ လက်ရှိကြုံတွေ့နေရတဲ့အခက်အခဲက လူတော်တွေ အလုပ်မမြဲဘဲ ထွက်ထွက်သွားနေကြတာပါပဲ။ ဒါကတော့ လူတော်တွေကို အပြိုင် လုနေကြတဲ့ စစ် Talent War ဖြစ်နေလို့ပါပဲ။ ဟိုးအရင်ကလို တော်တဲ့သူရော မတော်တဲ့သူရော အားလုံးဟာ တပြေးတည်း သတ်မှတ်ခဲ့တာတွေမရှိတော့ဘဲ တော်တဲ့သူကို တော်သလို ချီးမြှောက်ရမယ့်အခြေအနေကိုရောက်ရှိနေပါပြီ။ ဒီလိုအခြေအနေမှာ လူတော်တွေ မိမိတို့လုပ်ငန်းကနေ ထွက်မသွားအောင် အလုပ်မြဲနေအောင် သင့်တော်တဲ့ မဟာဗျူဟာ Retention Strategy တွေချမှတ် ရပါတယ်။ လူတော်တွေမိမိလုပ်ငန်းမှာ နေပျော်အောင် ပြိုင်ဘက်လုပ်ငန်းတွေဆီ ရောက်မသွားအောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့ နည်းလမ်းအချို့ကို ဖေါ်ပြလိုပါတယ်။
 Identify and focus on your real achievers. ပထမဆုံးအနေနဲ့လုပ်ရမှာက ၀န်ထမ်းတွေအများကြီးထဲကမှ စွမ်းဆောင်ရည်မြင့်မားတဲ့ ၀န်ထမ်းကောင်းတွေ ကဘယ်သူတွေဆိုတာကို အရင်ဦးဆုံးသိအောင်လုပ်ထားရပါမယ်။ လုပ်ငန်းအတွက် အဓိကစွမ်းဆောင်ပေးနေတဲ့သူတွေကို အသေအချာ နားလည်ဂရုစိုက်ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ဒီနေရာမှာသတိထားရမယ့် အချက်တွေ ရှိပါတယ်။
o Don’t confuse activity with performance. လုပ်ဆောင်ချက် activity နဲ့ performance စွမ်းဆောင်ရည်ကို ကွဲပြားနေဖို့လိုပါတယ်။ တချို့တွေ အလုပ်အရမ်းရှုပ်နေကြတာရှိပါတယ်။ အလုပ်နဲ့လက်နဲ့ ပြတ်တယ်ကို မရှိဘူးဆိုတာတွေရှိပါတယ်။ လုပ်ဆောင်ချက်တွေများနေတိုင်း လုပ်ငန်း စွမ်းဆောင်ရည်မဟုတ်ပါဘူး။ အဓိက က ရလဒ်အပေါ်မှာအခြေခံတဲ့ စီမံခန့်ခွဲမှု Result Based Management (RBM) ပါ။ Activity များနေပြီး Result ရလဒ်မထွက်ရင်အလကားပါပဲ။
o Consider performance, not noise. အလုပ်လုပ်နေကြောင်း အလုပ်တွေ များနေကြောင်းတဖွဖွပြောနေတတ်တဲ့သူတွေ လုပ်ငန်းတွေမှာ ရှိပါတယ်။ အဲလိုပြောနေတိုင်းလဲ ဒီဝန်ထမ်းဟာ လုပ်ငန်းစွမ်းဆောင်ရည် ကောင်းတယ်လို့မဆိုလိုနိုင်ပါဘူး။ ဒီလိုပြောမနေပေမဲ့ လုပ်ငန်းကို အကျိုးပြုနေတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ ရှိနေတတ်ပါတယ်။ အလုပ်တကယ် လုပ်တဲ့သူ အချို့ဟာ အလုပ်ရှုပ်နေကြောင်း ပါးစပ်ကထုတ်ပြောဖို့ အတွက် အချိန်မရှိလောက်အောင်ကိုပဲ အလုပ်ရှုပ်နေတတ်ကြတာပါ။ ဒါတွေကိုကွဲပြားအောင်ခွဲတတ်ဖို့တော့လိုပါတယ်။
o Remember, doers come in all shapes and sizes. အလုပ်လုပ်တဲ့ သူတွေဟာ ပုံစံအမျိုးမျိုးနဲ့ရှိနိုင်ပါတယ်။ ရာထူးငယ်တာ၊ ရာထူးကြီးတာ၊ အသက်ငယ်တာအသက်ကြီးတာနဲ့ မဆိုင်ပါဘူး။ ဒါကိုတော့ သတိရဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
 Know why top quality people leave. လုပ်ငန်းကိုအဓိကအကျိုးပြုနေသူတွေ ကဘယ်သူလဲ၊ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့သူတွေကဘယ်သူလဲဆိုတာကို ၀န်ထမ်းတွေအများကြီးထဲကရွေးပြီးတဲ့အခါမှာလုပ်ရမှာတစ်ခုက အဲဒီစွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝတဲ့ဝန်ထမ်းတွေ လုပ်ငန်းက ဘာလို့ထွက်သွားကြတာ လဲဆိုတဲ့မေးခွန်းရဲ့အဖြေကိုရှာဖွေရပါမယ်။ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝတဲ့ ၀န်ထမ်းကောင်းတွေရဲ့ အလုပ်နဲ့ ပတ်သက်ပြီးစိတ်ကျေနပ်မှုဖြစ်စေတဲ့ အချက်တွေ Satisfiers တွေကဘာတွေလဲ၊ သူတို့ရဲ့ Needs Level ကဘယ်နေရာမှာရောက်နေတာလဲဆိုတာတွေကို သိအောင်လုပ်ရပါမယ်။ လူတော်တွေလုပ်ငန်းကိုစွန့်ခွာသွားရတဲ့အကြောင်းအရင်းတွေတော့ အများကြီးရှိပါတယ်။ အဓိက ကတော့ အလုပ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး သူတို့မျှော်လင့်တဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှု ဖြစ်စေတဲ့အချက် Satisfiers တွေဟာ လက်ရှိအလုပ်မှာ သူတို့မရနေလို့ပါပဲ။ စာရေးသူတို့စဉ်းစားကြည့်ရအောင်ပါ။
o I’m not appreciated. ကျွန်တော့်ကို အသိအမှတ်မပြုကြဘူးဗျာ။ လုပ်ငန်းအတွက်ကျွန်တော့်မှာရှိသလောက် ကိုယ်စွမ်းဥာဏ်စွမ်း သုံးပြီး စွမ်းဆောင်ပေးခဲ့တာတောင် အသိအမှတ်ပြုတာ မခံရဘူး။ ကျွန်တော့်ရဲ့ ပါရမီ စွမ်းဆောင်ရည်ကို အသိအမှတ်ပြုမယ့်လုပ်ငန်းနေရာတစ်ခုခုတော့ ရှိမှာပဲ။ အဲလို အသိအမှတ်ပြုမယ့်လုပ်ငန်းကိုပဲရှာတော့မယ်။
o I’m bored. တစ်နေ့လာလည်းဒီအလုပ်တွေပဲလုပ်နေရတယ်။ ပျင်းလားပီမလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။ စိန်ခေါ်မှုအသစ်တွေကို လိုချင်တယ်။ စမ်းသပ်မှုအသစ်တွေကို လုပ်ချင်တယ်။ ကျွန်တော့်မှာရှိတဲ့ ပညာ၊ ဗဟုသုတ၊ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုတွေကို တနေ့လာလည်းဒီပုံစံနဲ့ပဲ မသုံးချင်တော့ဘူး။ ညည်းငွေ့လာပီ။
o I have no career prospects here. ကျွန်တော့်အတွက် ဒီအလုပ်မှာ တိုးတက်လမ်းမရှိပါဘူး။ အရှေ့မှာလည်း တန်းစီပြီးပိတ်နေတာပဲ။ ဒီလို Career တိုးတက်မှုမရှိဘဲ လစာပဲရနေတဲ့ လုပ်ငန်းမျိုးမှာ မလုပ်ချင်တော့ဘူး။
o I want to get better. ဒီမှာလုပ်ရတာ လုပ်ငန်းကျွမ်းကျင်မှုလည်း တိုးတက်မလာတော့ဘူး။ သင်တန်းပေးတာတွေ ဖွံ့ဖြိုးမှုအစီအစဉ်တွေ လည်းမရှိတော့ မလုပ်ချင်တော့ပါဘူး။
o I want to work with winners. ဒီအလုပ်မှာက စနစ်မကောင်းဘူး။ လက်တွဲလုပ်နေရသူတွေကလည်း ဒီပုတ်ထဲက ဒီပဲတွေပါပဲမလုပ်ချင် တော့ပါဘူး။ စနစ်ကောင်းပြီး အတွေးအခေါ်အသစ်တွေနဲ့ စွမ်းဆောင်ရည် ပြည့်ဝသူတွေနဲ့ပဲ လက်တွဲ လုပ်ချင်တယ်။
ဒီလိုအကြောင်းအရာတွေဟာ လုပ်ငန်းခွင်အတော်များများက ၀န်ထမ်းတွေ ဆီကမြင်တွေ့ကြားနေရတာတွေပါ။ မိမိလုပ်ငန်းအထဲကအဓိကစွမ်းဆောင် နိုင်သူတွေဟာ ဒီလိုတွေတွေးနေပြီလား။ ဒီလိုတွေပြောနေပြီလားဆိုတာ သိရှိအောင်လုပ်ဖို့ကတော့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေရဲ့ တာဝန်ပါပဲ။
 Developaretention plan for each top employee. နောက်လုပ်ရမှာတစ်ခုက အဓိကစွမ်းဆောင်နိုင်သူတစ်ဦးချင်းစီအတွက် ထိန်းသိန်းရေးအစီအစဉ် Retention Plan တွေရေးဆွဲထားဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ စီမံခန့်ခွဲသူတွေဟာ ၀န်ထမ်းကောင်းတွေရဲ့ မတူညီတဲ့ လိုအပ်ချက်နဲ့ စိတ်ကျေနပ်မှုတွေကို သိရှိဖေါ်ထုတ်နိုင်ရုံနဲ့ အလုပ်မဖြစ်သေးပါဘူး။ သိအောင်လုပ်တာဟာ Diagnose လုပ်တာဖြစ်ပြီး ဘယ်လိုကုရမယ်ဆိုတဲ့ နည်းလမ်း မဟာဗျူဟာကိုချမှတ်ရပါမယ်။ စီမံခန့်ခွဲသူတွေအနေနဲ့ မိမိတို့ဟာ ၀န်ထမ်းကောင်းတွေအားလုံးရဲ့ Needs တွေနဲ့ Satisfiers တွေကို စိတ်ဝင်စားမှု ရှိတယ်ဆိုတာ လုပ်ငန်းနဲ့ ၀န်ထမ်းကောင်းတွေရဲ့ Future အတွက် လိုအပ်တဲ့ မဟာဗျူဟာတွေ စီမံထားကြောင်းသူတို့သိအောင်လုပ်ရပါမယ်။ တစ်ဦးချင်းအတွင် Retention plan တွေပြင်ဆင်ထားပြီးရင်တော့ အပြန်အလှန် အနေနဲ့ ၀န်ထမ်းကောင်းတွေကို မေးသင်တဲ့မေးခွန်းတချို့ ပြန်မေးရပါမယ်။ သူတို့အနေနဲ့ လုပ်ငန်းဆီက မျှော်လင့်တဲ့ ရည်တို၊ ရည်ရှည် မျှော်မှန်းချက်တွေ ကဘာလဲ၊ ဘယ်လိုအရာတွေက လက်ရှိအလုပ်မှာလုပ်စေဖို့ တွန်းအား ဖြစ်စေတာလဲဆိုတာတွေမေးဖို့လိုအပ်ပါတယ်။
 Work proactively to retain your best employees.၀န်ထမ်းကောင်းတွေကို ထွက်မယ်ဆိုကာမှ ထိန်းဖို့မစဉ်းစားပါနဲ့။ ဘာဒဏ်ရာဒဏ်ချက်တစ်ခုမှ မရှိခင် ကတည်းက ဘယ်လိုမြဲအောင် ထိန်းထားရမလဲဆိုတာကို ကြိုတင်ပြင်ဆင်ထား ဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ ၀န်ထမ်းရေးရာစီမံခန့်ခွဲမှုအကြံပေးတစ်ဦးဖြစ်တဲ့ Robert Ramsey အကြံပြုထောက်ခံပေးထားတဲ့ မဟာဗျူဟာ တချို့ကို ဖေါ်ပြပေးလိုက် ပါတယ်။
o Set challenging goals and reasonable deadline. အတိုင်းအတာ တစ်ခုအထိစိန်ခေါ်မှုရှိမယ့် ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်တွေသတ်မှတ်ပြီး ဖြစ်သင့်ဖြစ်ထိုက်တဲ့ အပြီးသတ်ရမယ့် ရက်သတ်မှတ်ချက်ချမှတ်ပါ။
o Promote from within. ၀န်ထမ်းတွေကို စိတ်ဓါတ်ရေးရာတက်စေတဲ့ အဓိနည်းလမ်းတစ်ခုပါပဲ။ လုပ်ငန်းထဲက စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသူတွေကို ရာထူး၊ အခွင့်အလမ်းတိုးပေးပါ။
o Give full credit for achievement and effort. ၀န်ထမ်းတွေရဲ့ ကြိုးစား အားထုတ်မှုတွေ၊ အောင်မြင်မှုတွေကို အသိအမှတ်ပြုပေးပါ။ ၀န်ထမ်းတွေဟာ အထက်လူကြီးစီမံခန့်ခွဲသူတွေရဲ့ အသိအမှတ်ပြု ချီးကျူးတာကို ဂုဏ်ယူတတ်တာများပါတယ်။
o Delegate authority. အလုပ်နဲ့အတူ လုပ်ပိုင်ခွင့်ကို တပါတည်း ထည့်ပေးပါ။
o Pay attention. ၀န်ထမ်းတွေပေးတဲ့ တချို့အကြံဥာဏ်တွေကိုယူပါ။
o Let workers participate in making decisions. ဆုံးဖြတ်ချက် ချတဲ့ လုပ်ငန်းစဉ်တွေမှာ ၀န်ထမ်းတွေပါဝင်အောင်လုပ်ပါ။ ဒီလိုလုပ်တာဟာ တစည်းတလုံးတည်း အတူတကွပူးပေါင်းဆောင်ရွက်တယ်ဆိုတဲ့ teamwork စိတ်ဓါတ်လေးတွေဖြစ်ထွန်းစေပါတယ်။
o Be committed to excellence. အကောင်းဆုံးတွေကိုပဲ ဦးတည်လုပ်ဆောင်ပါ။
o Preach, teach, and practice teamwork. တစ်ဦးချင်းအားသာချက်တွေဟာ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်လိုက်ရင် လုပ်ငန်းအတွက် အားမာန်တွေဖြစ်ကြောင်းနားလည်အောင် စည်းရုံးပါ။
o Be open, honest, and up-front. လုပ်ငန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီး အကောင်းအဆိုး၊ အကြောင်းအကျိုးကို ဖြစ်နိုင်ရင် အဓိကစွမ်းဆောင် နိုင်သူတွေကို အသိပေးပါ။
o Encourage experienced workers to become mentor for newcomers. အတွေ့အကြုံရင့်ဝန်ထမ်းတွေအနေနဲ့ နောက်မှ ၀င်လာတဲ့ ၀န်းထမ်းအသစ်တွေအတွက် နည်းပေးလမ်းပြလုပ်ပေးသူတွေဖြစ်အောင် အားပေးတိုက်တွန်းပါ။
o Promote life-long learning. သင်ယူလေ့လာမှုအမြဲတမ်းရှိတဲ့ ပတ်ဝန်းကျင်ကောင်းတစ်ခုဖန်တီးပေးထားပါ။
ဖေါ်ပြပေးခဲ့တဲ့နည်းလမ်းတွေဟာ စွမ်းဆောင်ရည်ပြည့်ဝသူ ၀န်ထမ်းကောင်းတွေ၊ လူတော်တွေ အလုပ်မြဲအောင် ထိန်းသိမ်းထားနိုင်တဲ့နည်းလမ်းကောင်းတွေ ဖြစ်ပေမဲ့ အခြေအနေအချိန်အခါကို နားလည်ပြီးစီမံခန့်ခွဲနိုင်ဖို့ကတော့ စီမံခန့်ခွဲသူတွေရဲ့ လိမ္မာပါးနပ်မှုအပေါ်မူတည်မှာဖြစ်ပါတယ်။
Labels: Learning articles, စီးပွားရေး, စီမံခန့်ခွဲရေး